Akara nkuzi nke sitere na SAT Score 2021/2022 Application Portal Update: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
Nka akwukwo nke dabere na SAT Score 2021/2022 Application Portal Update
gbara akwụkwọ Nkuzi mmuta by Nhazi ederede TMLT na June 17, 2021
Scholarships nke dabere na SAT Score: Dị ka nwa akwụkwọ na-achọ inweta agụmakwụkwọ, biko gee ntị. Enwere scholarships ị nwere ike ịdabere na akara SAT gị. Iji kwuo okwu, agụmakwụkwọ ndị a chọrọ ka ị nwee akara SAT.
N'ihi ya, ọ dị mkpa idebe nke ahụ SAT akara elu na magburu onwe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụkwu, gụzie.
Ke ibuotikọ emi ị ga-agụ banyere ụfọdụ Ọnụ ọgụgụ SAT na agụmakwụkwọ metụtara ha. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara ihe akara SAT pụtara. Nke a ga - enyere aka mgbe ị na - ele ụfọdụ scholarships jikọtara ya.
Pụtara nke SAT Score
Iji ghọta ihe a Akara SAT bụ, ọ dị mkpa ịmata ihe bụ SAT. Dị ka nke a, rịba ama na, SAT bụ ule tozuru etozu nke a na-ejikarị maka nnabata kọleji na US Agbanyeghi na akpọburu ya Scholastic Aptitude Test, emesiri kpọọ ya Nnwale Nyocha nke Ọmụma.
Emechaa, akpọrọ SAT I: Reasoning Test. Ọzọkwa, SAT Reasoning Test, mgbe ahụ, naanị SAT. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọ debuted site na College Ndị isi na 1926, aha ya na akara ya agbanweela ọtụtụ oge.
Ọzọkwa, rịba ama na akara SAT bụ akara metụtara ule a. Ndị ọzọ okwu, ọ na akara onye nwere ule a. Mara kwa na akara akara SAT bụ 400-1600. Nke a bụ maka akara ngụkọta gị na 200-800 maka nke ọ bụla n'ime akara ngalaba gị abụọ.
Akara nkuzi mara mma site na ụfọdụ SAT Score maka 2021/2022
1. SAT Scores si 400 Ka 1,000
Ulo akwukwo nke ulo akwukwo nke anọ nke Army ROTC
Ọ dị mkpa iburu n'uche na agụmakwụkwọ a bụ maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị ụmụ akwụkwọ. Ọzọkwa, ọ bụ maka ndị na-eme atụmatụ ịga mmemme mahadum afọ anọ.
Matakwu banyere nke a mfọn, rịba ama. Kpọtụrụ onye ndụmọdụ agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ngalaba kọleji ndị Sayensị. Ọzọkwa, maka ama ndị ọzọ ma ọ bụ itinye, biko gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: Gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
chọrọ: Onye anamachọ agha aghaghi idi n’agbata 17 na 26. Ọzọkwa, ga-enwerịrị 2.5 GPA opekata mpe. Ọzọkwa, ga-enwerịrị diplọma ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ otu ihe. Ma ga-enwerịrị akara opekata mpe na 1000 na SAT / 19 na ACT ma zute ụkpụrụ anụ ahụ.
imecha: February 04, 2021.
Onu ogugu di: Gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
ngwa: PỊA EBE A.
Akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche nke iche iche
Nke a bụ otu n'ime Scholarships nke dabere na SAT Score. Akwụkwọ a na-akwalite iche iche. Ọzọkwa, ọ bụ n'ime ọrụ ahụ. Na, ọ bụ site na kwa afọ agụmakwụkwọ. Ọzọkwa, ọ bụ maka Black / African American, Hispanic, Native North American na ụmụ akwụkwọ Pacific Islander.
Otú ọ dị, rịba ama. Onye anamachọ ihe aghaghi inwe ma ọ dịkarịa ala nne ma ọ bụ nna mụrụ nwa nke so na otu n'ime otu ndị pere mpe ndị a:
Onye ojii / Afrika onye America.
Ọzọkwa, Nwa amaala North America.
Ọzọkwa, Pacific Islander.
Agbanyeghị, maka ama ndị ọzọ ma ọ bụ itinye, biko gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: $ 4,000.
chọrọ: Onye anamachọ ihe aghaghi ibu ihe obula na acho oru ya na oru. Ọzọkwa, ga-abụrịrị nwa akwụkwọ oge niile na-akụzi ihe na kọleji na US agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ akwadoro. Ga-enwerịrị GPA nke kacha nta nke 3.0 (na nha 4.0). Ọzọkwa, ga-enwerịrị akara opekempe ACT nke 28 ma ọ bụ SAT mgbakọ na mwepụ nke 600.
imecha: Mee 02, 2021.
2. SAT Scores si 1,001 Ka 1,200
CITe Ọzụzụ Mmụta Mmụta Na-abata
E guzobere Ọzụzụ Nkuzi Mmụta Mmụta nke ụmụ akwụkwọ CITe iji wepụta ụmụ akwụkwọ pụtara ìhè na mmemme sistemụ kọleji nke kọleji. Ọzọkwa, ọ bụ otu n'ime Scholarships dabere na SAT Score.
Ọzọkwa, biko mara. Ndị Kọmitii CITe ga-ahọrọ ndị nabatara akwụkwọ mmụta ahụ. Ọ ga-abụkwa dabere na ntozu agụmakwụkwọ.
Award Ọnụ ego: $ 2,000.
chọrọ: Onye anamachọ ihe aghaghi ibu onye ohuru. Ọzọkwa, ga-enwerịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị GPA nke opekata mpe 3.0. Na akara ACT nke opekata mpe 22 ma ọ bụ akara SAT opekata mpe 1010. Ọzọkwa, ga-abụrịrị Information Systems isi.
imecha: January 14, 2021.
Boise State WUE onyinye
Ọzọkwa, nke a bụ otu n'ime Scholarships dabere na SAT Score. Mana, iji tụlee maka WUE Award, rịba ama. Ga-abụ onye amaala ma ọ bụ onye bi na United States.
Na mgbakwunye, ị ga-enwerịrị obibi ebighi ebi n'ime otu n'ime steeti ndị na-eso / ókèala US:
Na mgbakwunye, California, ma ọ bụ Colorado.
Montana, Nevada, ma ọ bụ New Mexico.
Ọzọkwa, ị ga-enwerịrị 3.2 GPA site na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ma ga - enwerịrị 2.5 maka mmeghari ohuru. Agbanyeghị, maka ama ndị ọzọ ma ọ bụ itinye, biko gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: $ 51,544.
chọrọ: Ocho oru aghaghi ibu onye amaala ma obu onye bi na United States. Na mgbakwunye, ga-enwerịrị 3.2 GPA site na ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ma jigide 2.5 maka mmeghari ohuru.
imecha: Ọ Na-agbanwe.
3. SAT Scores si 1,240 Ka 1,400
Enyocha na Engebretson Foundation
Ọzọkwa, nke a bụ otu n'ime Ọmụmụ ihe dabere na SAT Score. Ọzọkwa, rịba ama na a na-enyefe otu nwa akwụkwọ nkuzi nkuzi Engebretson Foundation kwa afọ.
Agbanyeghị, nwa akwụkwọ ga-abụrịrị onye isi ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ma gosiputa ọ bụghị naanị mkpa ego kamakwa nnukwu arụmọrụ agụmakwụkwọ na ikike idu ndú.
Na mgbakwunye, rịba ama biko. Onye mmeri a na-enweta kwa afọ na-anata $ 5,000 kwa ọnwa nke kọleji. Ọzọkwa, ndị mmeri nwere ike itinye akwụkwọ maka ihe nrite kwa afọ. Mana onye nyocha ga-enwerịrị iwu nke 28 ma ọ bụ SAT nke 1240. Agbanyeghị, maka ama ndị ọzọ ma ọ bụ itinye, biko gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: $ 10,000.
chọrọ: Onye anamachọ ihe gha aghaghi ibu onye isi ulo akwukwo. Ga-egosikwa na ọ bụghị naanị mkpa ego kamakwa nnukwu ọrụ agụmakwụkwọ na ikike idu ndú. Ọzọkwa, ga-enwerịrị ACT nke 28 ma ọ bụ SAT nke 1240. Ọzọkwa, ga-enwerịrị 3.75 GPA ma ọ bụ karịa na / ma ọ bụ 5% nke klasị gụsịrị akwụkwọ.
imecha: March 01, 2021.
4. SAT Scores si 1,401 Ka 1,600
Christianlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Mahadum Christian Christian na-asọpụrụ
Ọ dị mkpa ka ị mara na onyinye CCU na-enye ndị ọhụụ ọhụụ. Agbanyeghị, ọ bụ maka ndị na-ahụ agụmakwụkwọ chọrọ. Ma ekwe nkwa maka ihe ruru afọ asatọ.
Nke a bụ ogologo oge nwa akwụkwọ ahụ na-enwe ọganihu agụmakwụkwọ na-eju afọ (SAP). Ọzọkwa, ma debanye aha ya na CCU's College of Undergraduate Studies.
Ọzọkwa, nke a bụ otu n'ime Scholarships site SAT Score. Agbanyeghị, maka ama ndị ọzọ ma ọ bụ itinye, biko gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: $ 7,000.
chọrọ: Onye anamachọ ihe agha gha inwe 3.0 GPA opekata mpe. Ọzọkwa, ga-enwerịrị akara opekata mpe ACT maka akara 21 ma ọ bụ SAT II akara nke 1450. Na mgbakwunye, ga-edebe 3.0 GPA na CCU. Na-ezute ihe niile ruru eru maka enyemaka ụmụ akwụkwọ
imecha: Ọ dị iche.
Site n'elu, rịba ama. Ohere gi inweta akwukwo mmụta a di elu dabere na akara SAT gi. Ya mere, site na akara SAT dị mma ma dị elu, ị na-enwe ohere ịtụle gị maka agụmakwụkwọ ndị a dị n'elu.
Agbanyeghị, gbaa mbọ hụ na ị mere ihe achọrọ tupu itinye akwụkwọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịkekọrịta isiokwu a. Ya mere, nweere onwe gị ịkekọrịta isiokwu a. ị nwere ike ịkekọrịta ndị enyi na ndị ezinụlọ. Jisie ike.
ASdị Nbanye LASCOHET maka Oge Ọmụmụ 2020/2021
Ndị Navy Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Nghawo 2021/2022 Usoro Achọpụtara
Nnyocha nke ihe ndị kpatara ọrụ dị ala nke ndị ọrụ Naijiria
RMIT Scholarships for Mmụta 2021/2022 Application Portal Update
UNICAL Post UTME Gara aga Ajụjụ 2021 & Azịza PDF Download
Ndị gụsịrị akwụkwọ na ndị isi nchịkwa na Dangote Group
10 Esemokwu dị n’etiti Cheeseburger ugboro abụọ na Mcdouble
« Tinye ugbu a maka nyocha kacha ọhụrụ na World Bank na Nigeria 2021
Nkọwapụta nke akụnụba: Kedu ihe ogo ogo mmụta ga - emere gị? »
Ndụmọdụ iji meziwanye nkà na mgbakọ na mwepụ gị